Dhaqtarkii ugu waynaa Soomaaliya ee daweynta TB-da oo Muqdisho ku Geeriyooday | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dhaqtarkii ugu waynaa Soomaaliya ee daweynta TB-da oo Muqdisho ku Geeriyooday
Waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday dhaqtarkii Soomaaliya ugu wanaagsanaa daaweynta cudurada neef-mareenka ku dhaca iyo Tiibashada Dr. Xeydar Cali Raage oo ku takhasusay cudurka Tiibashada “TB”.
Dr. Xeydar Cali Raage oo mudo ka badan 40 sano ka howlgalayay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu xarun caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba cudurka TB-da uu ku lahaa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho, waxaana gobolada dalka looga imaan jiray daaweyntiisa iyo khibrada fog ee uu u lahaa daweynta cudurkaasi.
Sida aan ka helnay ilo wareedyo ku dhow dhow ehelladiisa Dr. Xeydar ayaa waxaa soo ritay cudurka Coronavirus, oo uu ugu dambeyntii u geeriyooday.
Dr. Xeydar ayaa ka mid ahaa dhaqaatiirtii Soomaaliyeed ee tan iyo burburkii dalka meelna ugu bixin dalka, wuxuuna marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray uu ku shaqeynayay, isagoo ahaa dhaqtar u gargaara dadka dhibaateysan.
Xaruntii uu ku lahaa degmada Karaan ayaa dadka aan awoodin iney iska bixiyaan lacagta fiisitada waxay lahaayeen maalmo gooni ah oo dhaqtarku qaabili jiray iyadoo aysan jirin khidmo laga qaado, kuwii aan awoodinna inay iibsadaan daawada dhaqtarku ka bixin jiray qarashka daawada.
Ali Muhiyaddiin Ali
Caasimada Online, UK
Previous articleReer Muqdisho ma awoodaan Af Xirka lagu soo rogay
Next articleMadaxweyne Biden oo shegay in 4 July dadka Mareykanka ka xoroobi doonaan’ Covid 19
Ra’iisul Wasaare Rooble oo bogaadiyey Howlwadeennada Gargaarka Caafimaad ee la tacaalaya...
Dowlada Puntland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo...